Qorsheyso in aad ka rujin qalab Android aad? Haddii aad isticmaasho Samsung Galaxy S2 I9100 la Android 2.3.6, halkaan sii joogo. Tilmaan-bixiyahan waxa ku qoran si gaar ah idiin. Waxa ay si taxadar leh u hubi in loo yeelo Galaxy S2 I9100 + Android 2.3.6. Labada ka mid ah qalab iyo Android OS waa in la isku aadiyo. Haddii aan, aad u baahan tahay si ay u baadhaan hage rooting kale.
Waxaad hubin in hagahan waa fiican ee aad telefoonka? OK. Aan ka akhriyey kulan ku saabsan si loo hubiyo in talaabooyinka rujin aad Galaxy S2 I9100 talaabo talaabo ah.
Ka hor inta aadan bilaabin,
1) afjarno tirtiri kartaa damaanad. Waad sameynayo halis ugu adiga kuu gaar ah, oo aad horay u ogaado.
2) Qaado xogta aad taageeray si looga hortago in xogta laga badiyay, oo aad ka heli saas ku samayn.
Xididka aad I9100 Samsung Galaxy S2 Hadda
First of dhan, waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo khayraadka hoose waayo, shuqulkiinna waa dambe soo afjarno.
Tallaabada 1. waxyaabaha Macdan xirmo CF-Root-SGS2_XW_INU_KL1-v5.0-CWM5 in aad soo bixi on your computer.
Tallaabada 2. Hadda, qaban telefoonka iyo riix Volume Down + Home badhamada isku mar ku saabsan 5 ilbiriqsi reboot aad telefoon u geliyey Download Mode .
Tallaabada 3. Iska aad I9100 S2 xiran computer ka dhex ah cable digital USB. Markaas siibka v3.04.zip Odin3 in aad soo bixi ka hor iyo waxa maamula. On ay suuqa kala, calaamadi sanduuqa PDA sanduuqa. Oo halkaasaannu ka, dooro CF-Root-SGS2_XW_INU_KL1-v5.0-CWM5.tar faylka.
Tallaabada 4. On dariishaddii Odin3, hubi oo keliya Auto reboot + F.Reset Time . Markaas riix Start button. Ka dib markii ay in yar, telefoonka si toos ah reboot doona marka habka rooting dhamaado.
Tallaabada 5. Marka geeddi-socodka ay ka badan tahay, aad arki doonaa PASS! on furmo suuqa. Markaas barkinta qalab aad marka ay jirto dami muuqday homescreen qalab ee.
Tallaabada 6. Ka dib markii in, riix Up Volume + Home badhamada in reboot aad telefoon u geliyey Mode Recovery .
Tallaabada 7. Halkan ka dooro ogolaan in xogta / warshad dib iyo xaqiijin tallaabada shaashadda soo socda iyo sidoo kale Dooro masax Cache xijaab iyo xaqiijin tallaabada shaashadda soo socda.
Tallaabada 8. Haddaba dhamaadka, noqo in menu ugu weyn oo ay doortaan reboot System Hadda ku guuleysatey in qalab aad.
Kabsado Xiriirada ka Galaxy S4 , Maqaalkani waxa uu kuu sheegayo ku saabsan sida inuu ka soo kabsado xiriirada tirtiray ka Samsung Galaxy S4 in 3 tallaabo. ka Galaxy S4 Ladnaansho SMS : Tilmaan-bixiyahan waxa aad soo bandhigaysaa hab fudud inuu ka soo kabsado fariimaha ka Samsung Galaxy S4 in xoogaa tallaabooyin ah. kabsado Videos ka Galaxy S3 Mini : Waxaad soo kaban karto, tirtiray videos ka Samsung Galaxy S III mini la xoogaa tallaabooyin istareexsan. Samsung Galaxy S Photo Recovery : Tilmaan-bixiyahan waxa idin ​​bara sida loo soo ceshano sawirada qalabka Samsung Galaxy S 3 tallaabooyinka.
A Guide for Full Sida loo xidid Nexus 9
Sida loo Flash ROM ah in Device Android
Sida loo xidid Samsung Galaxy Nexus (GT-I9250) carar 4.2.1 Android
> Resource > Talooyin Root > Sida loo xidid Samsung Galaxy S2 I9100 la 2.3.6 Android